प्रभु बैङ्कको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण : | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर प्रभु बैङ्कको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
on: August 29, 2018 मुख्य खबर, लगानी
प्रभु बैङ्कको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को चौंथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार रू. १ अर्ब १२ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवमा रू. १ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएको थियो । बैङ्कले गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खराब कर्जा सङ्कलन र सम्भावित जोखिम शीर्षकमा बढी रकम छुट्याएका कारण नाफा असर परेको हो । अघिल्लो वर्षमा रू. १ अर्ब ७२ करोड खराब कर्जा उठाएको बैङ्कले असार मसान्तसम्ममा रू. ९० करोड ८ लाख खराब कर्जा उठाउन उठाएको छ । बैङ्कको चुक्तापूँजी ४० प्रतिशतले बढेर रू. ८ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । बैङ्कले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेपछि चुक्तापूँजी बढेको हो । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. ३ अर्ब ४२ करोड छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट बैङ्कले रू. २५ करोड ८६ लाख आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवमा रू. १९ करोड ४ लाख आम्दानी गरेको थियो ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १८२
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू.४९७
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. १७५
१८० दिनको औसत व्यापार मूल्यः रू. २०६.०५
असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. ९७ अर्ब २५ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. ७५ अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप १९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २२ प्रतिशतले बढी हो । बैङ्कको लगानी ५३ प्रतिशतले बढेर रू. १७ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. २ अर्ब ९८ करोड, कर्मचारी खर्च रू. १ अर्ब १४ करोड, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ८८ करोड ६९ लाख र सञ्चालन नाफा रू. १ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी १७ दशमलव ९९ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति रू. २ अर्ब १२ करोड र अन्य सम्पत्ति रू. ५ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५५ करोड ३९ लाख छुट्याएको छ । पूँजीकोष पर्याप्पता १२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कको चौंथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव २५, मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव ५१, तरलता अनुपात २९ दशमलव ३० प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ७१ दशमलव २५ रहेको छ । आइतवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ८५ रहेको छ ।
खरीद चापः बैङ्कको मङ्गलवार भएको कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्रि चापभन्दा खरीद चाप साढे ८ गुणा बढी थियो । सो समयसम्म २८ हजार ३ सय ९३ कित्ता शेयर खरीद र ३ हजार २ सय २५ कित्ता विक्री गर्ने माग थियो ।
मङ्गलबार भएको शेयर कारोबार विवरणः
२८ मे २०१८ २८ अगष्ट २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्ककोे ६५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले बैङ्कको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः बैङ्कको ६५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४१ दशमलव ६६ स्केल)मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाँउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ० दशमलव ८० विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुने र प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ६५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औषत मूल्यरेखा र १४ दिने औषत मूल्यरेखा एक आपसमा नजिकिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल रहेको छ । मङ्गलवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ८२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. १ सय ८३ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ८० मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २४ पुस २०७५)
प्रभु बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ६ पुस २०७५)
७ ओटा भन्सार कार्यालयमा प्रभु बैङ्कको काउण्टर